Fraport neEnBW vanopedzisa chibvumirano chitsva chekutenga magetsi cheHe Dreiht offshore wind farm
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Fraport neEnBW vanopedzisa chibvumirano chitsva chekutenga magetsi cheHe Dreiht offshore wind farm
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Sustainability News • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
85 megawatts egirinhi yemhepo yemhepo yekumahombekombe inovandudza kabhoni yeFraport paFrankfurt Airport.
Nhoroondo ye Fraport AG, mushandisi akanyorwa pachena weFrankfurt Airport, uye EnBW, mupi wemagetsi ane muzinda weKarlsruhe, vakapedzisa chibvumirano chekutenga magetsi emakambani (CPPA) yekugovera magetsi anogadzirwa nemhepo yemhepo. Kondirakiti yenguva refu inovimbisa Fraport 85 megawatts (MW) kubva ku900 MW EnBW He Dreiht mhepo purazi muNorth Sea kumahombekombe eGermany. CPPA inotanga kushanda muhafu yechipiri ye2026, uye ine nguva yemakore gumi nemashanu.
Nekupera kwezvibatsiro zvekare pasi peGerman Renewable Energy Sources Act (EEG), maPPAs ave kuita chinhu chakakosha chekuchinja kwesimba: Vanopa vanogadzira mapurojekiti emagetsi anovandudzwa neakavimbika sosi yemari apo vachibatsira vatengi kukurumidza kuwana mamiriro ekunze aneshungu. zvinangwa. "Zvibvumirano zvenguva refu zvekutenga magetsi imhinduro yemusika kusimudzira shanduko yesimba kunyangwe pasina rutsigiro rwehurumende," akatsanangura. EnBW CEO Frank Mastiaux. “MaPPA anobatsirawo vanotenga, vanogadzira zvirongwa nemamiriro ekunze. Kwatiri, ndiwo kiyi pakati pesimba rinogadzirwazve nevatengi vedu vakuru. "
CPPA inotanga kushanda muzhizha ra2026. Ichaita kuti Fraport kushandura chikamu chakakura chekushandiswa kwemagetsi pairi Frankfurt Airport musha base kune simba rakasvibirira. Fraport Mukuru mukuru Dr. Stefan Schulte akati chibvumirano chakaratidza chiitiko chakakosha muhurongwa hweFraport hunoenderera mberi hwekuita decarbonization: "Zvinovandudzwa zvakaita semhepo uye solar ndizvo zvinotariswa nehurongwa hwedu hwemamiriro ekunze. Ivo vanopa hwaro hwakasimba hwepakeji yakazara yematanho ekudzikisa zvakarongeka CO yedu2 zvinobuda. Chinangwa chedu chakajeka ndechekuita Frankfurt Airport kabhoni-isina ne 2045. Simba rinotorwa kubva kune ino nyowani offshore wind park ichaita basa repakati. Sevashandi vepanhandare yendege, isu tinonyanya kuvimba nesimba rakavimbika, rakagadzikana rinogona kukwidziridzwa kuti rizadzise zvido zvedu zviri kukura. MuEnBW, takawana shamwari yakasimba. Zvichienzaniswa neakare simba masosi ataimbovimba nawo, CPPA itsva inovhura mari inogona kuchengetwa inosvika 80,000 matani ecarbon dioxide pagore.
85 megawatts egirinhi simba kubva kuNorth Sea
EnBW yakatanga maitiro matsva mumusika wekumahombekombe neprojekti yeHe Dreiht muna 2017. Kekutanga muokisheni kuGermany, kambani yakawana kodzero dzekuvaka 900 MW purazi remhepo kuburikidza nekubhadhara mari yerubatsiro yezero sendi pakWh. Iri pedyo nemakiromita makumi mapfumbamwe kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwechitsuwa cheBorkum uye anenge makiromita 90 kumadokero kweHeligoland, He Dreiht yakarongerwa kuenda mukushanda muna 110. Sarudzo yekudyara yakarongerwa 2025. Iyo purazi yemhepo ine inenge 2023 turbines ikozvino imwe yehukuru hukuru. mapurojekiti ekuchinja kwemagetsi muEurope. Ichave zvakare yekutanga kushandisa maturbines ane huwandu hwe60 megawatts imwe neimwe. Nenzira yekuenzanisa, purazi remhepo rekutanga rekuGermany remhepo, EnBW Baltic 15 yakavakwa muna 1, ine simba re 2011 megawatts per turbine.